साउनमा व्रत कसरी बस्ने ? के छ वैज्ञानिक फाइदा ? साउनमा व्रत कसरी बस्ने ? के छ वैज्ञानिक फाइदा ?
साउनमा व्रत कसरी बस्ने ? के छ वैज्ञानिक फाइदा ?
व्रत बस्ने बिभिन्न विधि र प्रकारहरु छन् । कोहि श्रावणको सोमबार मात्र व्रत बस्दछन् भने कोहि पुरा महिना व्रत बस्दछन् । व्रतका दिन कसैले निराहार बस्दछन् भने कोहि फलफूल वा मकैको भात खाने गर्दछन् । तर जे भएपनि व्रतका दिन अन्य दिन भन्दा शुद्ध र शाकाहारी मात्र खाने गरीन्छ । यस्ता छन्, व्रतका फाइदा १- व्रत बस्दा खराब खानेकुरा अर्थात सडेको, गलेको, बासी, कुहिएको खानेकुरा खाइदैन ।२- व्रतमा पचाउन गाह्रो हुने माछामासु खाइदैन जसका कारण स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ । ३- व्रत बस्नेले शुद्ध र ताजा खानेकुरा मात्र खाने भएकाले यसले शरीरलाई फाइदा पुर्याउँछ ।
४- व्रत बस्दा पाचनतन्त्रमा विश्राम पुग्नुको साथै अपच भएको पनि सफा हुन्छ । ५- व्रतका क्रममा मानिस ध्यानमग्न हुने भएकाले मनस्थिीतिमा एकाग्रता आउँछ । अतः शरीरको विकार हटाउन र उर्जावान् बन्न पनि व्रतले फाइदा पुर्याउँछ । भगवानको आराधनामा ध्यान रहदाँ मानिसको विचलित मनमा शान्ती प्राप्त हुन्छ । व्रतले भगवान खुसी हुने मात्र होइन शरीर स्वस्थ्य, मन शुद्ध र सकारात्मक हुने गर्दछ ।